काठमाडौंमा आजबाट निषेधाज्ञा खुकुलो, कुन पसल कुन समयमा खोल्न पाइने ? (सूचीसहित) - Micro Sansar
काठमाडौंमा आजबाट निषेधाज्ञा खुकुलो, कुन पसल कुन समयमा खोल्न पाइने ? (सूचीसहित)
२०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
काठमाडौं उपत्यकासहितका जिल्लामा आजदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ । काठमाण्डौमा आजदेखि जोर-बिजोरका आधारमा निजी गाडी सञ्चालन हुन थालेका छन् ।
आज मङ्गलवार काठमाण्डौ उपत्यकामा सुन पसल, भाँडा, भान्साजन्य, विद्युतीय, अटोमोबाइल शो–रुम, पार्ट्स पसल, मोबाइल तथा कम्प्युटर पसल खोल्न पाइनेछ । यी पसल आइतवार र बिहीवार पनि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । यस्तै शपिङ मल र खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट, टेलरिङ पसल सोमवार, बुधवार र शुक्रवार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म खोल्न पाइने छ । खाद्यान्न, दूध, फलफूल, तरकारी, माछामासु, पूजा सामग्री, खेलकुद सामग्री, डिपार्टमेन्टल स्टोर, स्टेशनरी बिहान ११ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
निर्माणजन्य सामग्री पसल हार्डवेयर, स्यानिटरी, फर्निचर कार्पेटिङ दैनिक बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ । अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन तथा टेक अवे सेवा होम डेलिभरी काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बेलुका ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ । वर्कशप बेलुका ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन क्षेत्र, सैलुन, ब्युटी पार्लर, फुटसल, जिमखाना, पुस्तकालय, चिडियाखाना, दर्शकसहितका खेलकुद तथा भीडभाडका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन । फुटपाथको व्यापार पनि रोक लगाइएको छ ।
अब घरबाट निस्कन पाइने भएको छ । तर स्वास्थ्यका मापदण्ड भने पालन गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक गाडी आउँदो १४ गते रातिसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । मोटरसाइकल तथा स्कुटरसहित निजी गाडी जोर–बिजोर चल्न पाउने भएका छन् । आज जोर गते भएकाले पछिल्लो नम्बर जोर भएका निजी गाडी सञ्चालन गर्न पाइनेछ । कार, जीप, भ्यानमा बढीमा चार जना, ट्याक्सीमा बढीमा तीन जना हुनुपर्नेछ ।
पठनपाठन अनलाइन तथा वैदेशिक अध्ययन र डीभी परेका व्यक्ति तथा कुटनीतिक नियोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षा तथा भिसा अन्तवार्ताका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । उद्योग तथा कलकारखाना र निर्माणका काम गर्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुरोध गरेका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा आलो पालो गरी न्यूनतम जनशक्तिबाट सेवा दिने तथा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूमा स्वास्थ्य मापदण्डसहित थोरै जनशक्ति र वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी सञ्चालन गने निर्णय भएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकाबाहेकका अरु जिल्लाहरुले पनि यसैगरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएका छन् । धेरै जिल्लाहरुमा पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा हिजोदेखि सकिएको थियो । ती जिल्लाहरुमा पनि निषेधाज्ञाको अवधि एक हप्ता थप्दै खुकुलो बनाइएको हो । खोटाङ र मनाङबाहेकका जिल्लामा निषेधाज्ञा लाग्दै आएको छ ।
गोरखाकी एक युवतीको बसको ठक्करबाट मृत्यु
मलाई गुरुङ्गकै आमा हुन लेखेको रहेछ। दुईवटा सिरियलमा दुई जना मेरो गुरुङ्ग छोरा जिबेश अनिल । (भिडियो) २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
प्राविधिक समस्या समाधान भएसँगै नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा सुरु २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो सहित पदमुक्त भए यी मन्त्रीहरु(सुचीसहित) २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
२१ जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
काठमाडौंमा आजबाट निषेधाज्ञा खुकुलो, कुन पसल कुन समयमा खोल्न पाइने ? (सूचीसहित) २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
गोरखाकी एक युवतीको बसको ठक्करबाट मृत्यु २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
ज्वाला संग्राैला पक्राउबारे बाेले रबि लामिछाने,भिम उपाध्यायले गरे रिहाइकाे माग २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
मेलम्चीबाट फर्किएकि आँचल शर्माले सबैलाई चकित पार्ने गरि यस्तो भनिन् २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य हेर्नुस् २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
अब दुई प्रकारको लाइसेन्स २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
असारको दोस्रो हप्ताबाट स्मार्ट लकडाउन लगाउने तयारी २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
गोरखा नगरपालिका वडा न १ मा ६१९ घरधुरीलाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
कति राजनिती गरेको म माथी: ज्ञानेन्द्र शाही २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते
मेलम्ची बाढीको नाममा चन्दा वा सहयोग संकलन गरे २ बर्ष कैद र एकलाख जरिवाना हुने २०७८ असार ८, मंगलवार १३:५६ गते